ဆန္ဒပြ ရွှေလုပ်သားများ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးမှု ပဋိပက္ခ ကြီးထွားလာနိုင် | ဧရာဝတီ
စနေလင်း| November 28, 2012 | Hits:1
| | ရမည်းသင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်ကွက်
မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်သားများအား အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခြင်းများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေမည် ဆိုလျှင် ပဋိပက္ခ ကြီးထွားလာနိုင်သည့်အပြင် အစိုးရနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား နိုင်ငံရေးအရ သံသယစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက ပြောကြားလိုက်သည်။
ထိုသံသယစိတ်ကြောင့် တည်ဆောက်ဆဲ အစိုးရနှင့်ပြည်သူများအကြား နိုင်ငံရေးအရ စိတ်ချယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းလည်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သည့် ကိုဂျင်မီက ယမန်နေ့က ပြော သည်။
“အခုလို အကြမ်းဖက်တာမျိုးကြောင့် နောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး၊ တကယ်တော့ အင်အားကြီးတာက အစိုးရပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြီးထွားလာမှာက သံသယပဲ။ အခုကာလက နိုင်ငံရေးအရ စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိအောင် ၀ိုင်းကြိုးစားနေတဲ့ကာလ။ အဲဒီထဲမှာ ကျနော်တို့လည်း ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပါတယ်။ အကုန်လုံးဝိုင်းကြိုးစားနေတဲ့ ကာလ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အစိုးရ လို ရပ်တည်လာပြီဆိုရင် အစိုးရက ပိုပြီးတော့အရေးစိုက်ရမယ်။ အဲဒီကြီးလာမယ့် သံသယကိုသာ ဖြေဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားပါ”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်က ပဲခူးတိုင်း မြို့လှမြို့အထွက် ရေနီစက္ကူစက်ရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ ရွှေလုပ်သားများကို အကြမ်းဖက် ရိုက် နှက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရွှေလုပ်ငန်း သမား ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီး ရာတွင် အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ဖမ်းဆီးမည့်သူကို ဓာတ်ပုံ အထောက် အထား များနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စတင်ဖမ်းဆီးစဉ်က လူ ၆ ဦး ဖြစ်ပြီး ၂ ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဖမ်းခံထားရာမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာသည့် ကိုရဲဝင်း ဆိုသူက ပြောသည်။
ယခုအချိန်အထိ မိုးထိမိုးမိရွှေလုပ်သား၅ ဦး အဖမ်းခံထားရကြောင်း၊ ကိုနေအောင်ထက်၊ ကိုစောနောင်၊ ကိုရဲရင့်ထွန်းနှင့် ကိုနိုင်ဝင်း တို့ ဖြစ်ပြီး ယမန်နေ့က မြို့လှမြို ဈေးတွင် ကိုဖိုးဇော်လည်း အဖမ်းခံထားရကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့အင်အားက ၅၀၀ ကျော်လောက်လာတယ်။ ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီး ကျနော်တို့ကို ရိုက်နှက်၊ လက်ထိပ်ခတ်၊ ဒရွတ်တိုက် ဆွဲပြီး ကားပေါ်ကို ဆွဲတင်တယ်။ ကားပေါ်ရောက်မှ နာမည် မေးတယ်။ နောက်မှ သူတို့ဖမ်းချင်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ၂ ဦး ကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ သူတို့ဖမ်းချင်တဲ့သူ ၄ ဦးကိုတော့ မြို့လှမြို့ထဲခေါ်သွားတယ်။ သူတို့ ဘယ်သူ့ကို ဖမ်းရမယ်ဆိုတာ ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ ပါတယ်”ဟု ကိုရဲဝင်းက ဆက်ပြောသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ မိုးထိမိုးမိရွှေလုပ်သားများအရေးကို အဓိက ဆောင်ရွက် နေသည့် ကိုအောင်သူကလည်း မိုးထိ မိုးမိ ရွှေလုပ်သားများ ဆန္ဒပြမှုသည် အစောပိုင်းတွင် အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သော် လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရဘက်မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ နေခြင်းကြောင့် အစိုးရနှင့် ထိပ် တိုက်ရင်ဆိုင် ရသောပုံစံ ဖြစ်လာကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ပထမ အစတုန်းက သူတို့အခွင့်အရေးအတွက် ကုမ္ပဏီကို တောင်းဆိုတာ။ ဒါကို အစောတလျှင် ဖြေရှင်း မပေးတဲ့အတွက် လုပ် ငန်းရှင်ငယ်လေးတွေနဲ့ အစိုးရ ထိပ်တိုက်အနေအထား ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့က သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကမ်းလှမ်း ထားတယ်။ နောက် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ကမ်းလှမ်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ အရေးတယူ ဆောင်ရွက် ပေးတာမျိုး မရှိဘူး”ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုအခါ ရေနီမြို့နယ်တွင် ပိတ်မိနေသော ဆန္ဒပြ မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်သားများကို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ၎င်းတို့ နေရပ်သို့ လုံခြုံရေး အစောင့်အရှောက်ဖြင့် ပြန်ပို့ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ရွှေလုပ်သားများ၏ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ နေအိမ်တဲများကို မီးရှို့ဖျက် ဆီးခြင်း ခံထားရကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သော အိုးအိမ်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချကာ ရွှေလုပ်ကွက်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ထားသောကြောင့် ယခုအရေးသည် ၎င်းတို့၏မိသားစုဘ၀၊ ၎င်းတို့ကို မှီခိုနေသောလုပ်သားများ၏ မိသားစုဘ၀များနှင့် များစွာ ဆက်စပ်နေကြောင်း ကိုအောင်သူက ဆက်ပြောသည်။
လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် ရမည်းသင်းမြို့၌ အမျိုးသားကြီးပွား တိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ရွှေလုပ်သားများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဖမ်းခံထားရသည့် ရွှေလုပ်သားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ကိုနေအောင်ထက်၊ ကိုစောနောင်၊ ကိုရဲရင့်ထွန်းနှင့် ကိုနိုင် ၀င်းတို့ကို နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပျက်ပြားစေသည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် ရေတာရှည်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး က တရားလို ပြုလုပ်ပြီး စွဲချက်တင်ထားကြောင်း၊ ထို့အပြင် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် မြို့လှမြို့နယ် ရဲစခန်းမှူး က တရားလိုပြုလုပ်ကာ အမှုဖွင့် စွဲချက်တင်ထားကြောင်း တောင်ငူခရိုင် ရဲမှူးကြီးက ပြောသည်။
“နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သူတွေကို ရေတာရှည်တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပါ့မယ်။ သူတို့ကို တပေါင်းတည်းနဲ့ တစ်ရုံးတည်းမှာ စွဲချက်တင်မှာပါ”ဟုလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
Master Sports က စက်ရုံပစ္စည်းများ လေလံတင်၍ အလုပ်သမားများ လုပ်ခလစာ ရှင်းပေးမည်အာရှတလွှား အလုပ်သမားများ လုပ်ခလစာတိုးရေး တောင်းဆိုကြပြီလုပ်အားခတွေ တိုးစေချင်မြန်မာကို ကျွန်သဖွယ် စေခိုင်းသည်ဟု စွပ်စွဲချက်ကြောင့် ထိုင်းကို အနောက် ကုမ္ပဏီများ ဖိအားပေးကိုရီးယား သံရုံးရှေ့တွင် Master Sports ဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
AKN November 28, 2012 - 12:27 pm There is always amicable solution. If the stakeholders and the authorities do not want to solve that way, it will becomeahistory.
Reply ရွှေဘ November 28, 2012 - 12:29 pm “သူတို့အင်အားက ၅၀၀ ကျော်လောက်လာတယ်။ ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီး ကျနော်တို့ကို ရိုက်နှက်၊ လက်ထိပ်ခတ်၊ ဒရွတ်တိုက် ဆွဲပြီး ကားပေါ်ကို ဆွဲတင်တယ်။ ကားပေါ်ရောက်မှ နာမည် မေးတယ်။ နောက်မှ သူတို့ဖမ်းချင်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ၂ ဦး ကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ သူတို့ဖမ်းချင်တဲ့သူ ၄ ဦးကိုတော့ မြို့လှမြို့ထဲခေါ်သွားတယ်။ သူတို့ ဘယ်သူ့ကို ဖမ်းရမယ်ဆိုတာ ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ ပါတယ်”ဟု ကိုရဲဝင်းက ဆက်ပြောသည်။
အပြောင်းအလဲလုပ်နေကြတယ်ဆို….ဒါမျိုးကျ ဘာလို့မပြောင်းကြတာလည်း…? နေဝင်းလက်ထက်ကတည်းတောက်လျှောက်လုပ်လာကြတာ…အရိုက်ခံရတဲ့လူတွေလည်း trauma၊ ရိုက်တဲ့လူတွေလည်း trauma…ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုသွားကြမယ်ဆိုတာစဉ်းစားမရအောင်ပဲလေ….”ဗမာ့စောင်း” ထဲကဘုန်းကြီးပြောသလို…”ဗမာပြည်ဟာ ဗမာပြည်ပဲ” ဆိုတာမျိုးများလားဗျို့….။
Reply ဗမာပြည်သား November 28, 2012 - 2:43 pm ဗမာပြည်မှာ ခေတ်အဆက်ဆက် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှမှာ အစိုးရလူထည့်ထားပြီးသား။ သူကတဆင့် ဓါတ်ပုံ၊ အမည်စာရင်းရပြီး ဖမ်းတာချည်းပဲ။ သတိထားကြပါ။ ဖမ်းမှာမကြောက်တဲ့သူ၊ သေမှာမကြောက်တဲ့သူဆိုတာ (၂)မျိုးပဲရှိတယ်။ (၁) တကယ့် သူရဲကောင်း (၂) သူလျှို ။
ခုဟာက မင်းအောင်လှိုင့်ဆင်ကွက်ထဲ ၀င်တော့မယ်။ ကျုံးသွင်းနေပြီ။
“ဗမာပြည်သားဟေ့ .. ဗမာပြည်သား .. ”
Reply pnwara November 28, 2012 - 5:10 pm အပြောင်းအလဲကို ယုံပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ အတွက် စစ်တပ်နောက်ခံ ဘောင်ဘီချွတ် အစိုးရ ရဲ့ပကတိ ပုံရိပ် ကွဲပြားလာပြီဖြစ်တယ်။ ကဲ-ဘာလုပ်ကြမှာလဲ–
Reply ko zinn November 28, 2012 - 5:19 pm သူတို.က အာဏာရှင်စိတ်ဓတ်တွေ မကုန်သေးဘူးလေ ပြီးတော.လဲ သူတို.အဖွဲ.ပြောနေတဲ.ဒီမိုခရေစီဆိုတာကိုလည်း အပြည်.အ၀မယုံကြည်နိုင်သေးဘူး။
Reply မောင်မောင်လှ November 28, 2012 - 9:47 pm ဒါဘဲဗျာ ဗမာပြည်ဆိုတာ သမ္မတကြီးထောက်ခံပွဲတို့ ကင်တာနားရှုတ်ချပွဲတို့ ကြတော့ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်၊ အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူတွေကြတော့ ဖမ်းဆီးတယ်၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကိုဘယ်သူဖန်တီးတာလဲ၊ ဘယ်သူဦးဆောင်တာလဲ အစိုးရကို မဖော်ခိုင်းနဲ့တသက်လုံးမိမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုမျိုး ပဋိပက္ခတွေများလာရင် နောက်ထပ် အဓိကရုန်းသို့ မဟုတ် တခုခု ထပ်ပေါ်အုံးမှာဘဲ၊ ဗမာတွေကလည်း၊ အမျိုးဘာသာကို စောက်ရှောက်တဲ့ ဒီလိုအစိုးရကြီးကိုထောက်ခံကြဦးမှာဘဲ။ လုပ်ကွက်တွေက ရိုးနေပြီ၊ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေက မရိုးတာ၊ ဒီအကွက်ထဲဘဲ တန်းဝင်တော့တာဘဲ။ သတိထားပေါ့ဗျာ၊ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ အမျိုးသားရေးကိုကြိုက်သလောက် ထားဗျာ အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်အောက်ထားလိုက်ကြပါဦး၊ အမှန်တွေနဲ့ ဝေးနေမှာ စိုးရိမ်လို့ သတိပေးရတာပါ၊ ဒီအစိုးရက လူတွေက အရင်လူဟောင်း အကျင့်ဟောင်းတွေနဲ့ ဆိုတာ မမေ့ကြရင် ပြီးတာပါဘဲ။ ခင်ဗျားတို့ အသုံးချခံတွေမဖြစ်ကြစေနဲ့ ပေါ့ဗျာ